Wholesale 10x20Ft (3x6M) Heavy Duty PVC Party Tende uye Greenhouse | Kukunda
10x20Ft (3x6M) Heavy Duty PVC Party Tende
19-29 Zvidimbu 30-49 Zvidimbu
Iyi tende repati yakakosha kune chero zviitiko zvekunze, senge zvinoratidzira, michato, mapato, bharuki. Iwe unogona zvakare kuiisa mumashure medu seyakakura, inovheneka zuva kuti ufadze mhuri yako nevashanyi.
2) Chitubu mabhatani pazvibatanidzwa zvekumisikidza nyore uye kutora pasi
3) Pamusoro pevhavha seams inopisa-yakavharwa, isina mvura
Model Nhamba WS-P236
Item zita 10x20Ft (3x6M) rinorema basa PVC yebato tende
Kukura kwechigadzirwa 10x20Ft (3x6M)
Chakafukidza zvinhu 500gsm PVC
Masvingo emadziro 380gsm PVC
Chimiro spec. Dia 42 * 1.2 / 38 * 1.0mm kwakakurudzira simbi sepombi
Kurema 84 KG
MOQ Zvidimbu gumi
10x20ft (3x6m) Dhizaini Yakajairwa
Yakanakira zviitiko zvekunze uye kuva nepikiniki nemhuri yako kana kugovana masikati tii neshamwari dzako.
Yakakwira Hunhu, inorema-basa kwakakurudzira simbi furemu.Rust & ngura inodzivirira furemu. Chimiro chakasarudzika chetriangle, ichiita kuti denga repamusoro riwedzere kugadzikana & kusimba.
100% isina mvura, UV inodzivirira PVC machira inogona kupa mamiriro akasununguka echiitiko chako kunze. Masvingo emusuwo nemusuwo zvinogona kufambiswa zviri nyore.
Isu tinoshandisa mabhatani echirimo uye tsoka yesimbi uye hoko inoita kuti tende igare yakasimba, yakazara uye yakasimba. Iwo machena maturu ane akafanorongerwa maburi ekubatanidza tambo ye bungee kuburikidza uye inosimbiswa ne grommets kudzivirira iyo turu kubva pakubvaruka. Tambo dzebungee dziri nyore kupeta nepamaburi uyezve kutenderera matanda esimbi kuti uchengetedze.
Mhando yepamusoro zvishongedzo ndizvo vimbiso yezvigadzirwa zvepamusoro. Panzvimbo pekushandisa epurasitiki zvishongedzo zvisina kusimba zvakanyanya, tinoshandisa mabhatani echirimo uye tsoka yesimbi uye hoko izvo zvinogara zvakasimba, kuzara uye kusimba.
Pashure: 6x12m Heavy Duty PVC Yemuchato Party Tende Ine Moto Retardant
Zvadaro: Inotakurika Mota Canopy Ine Isina Mvura 10'x20 '
Budget Party Tende
Tende Yemapati Yakachipa
Kunze Mutambo Tende
Tembere Yemuchato Tende
Budget 5x10m PE Chiitiko Party Tende
Heavy Duty Kunze Tende Yezviitiko Muchato 5x8m
Kunze PVC Party Tende 4x4m
Kupisa Kutengesa Kwakachipa Bato Tende 13x20ft (4x6m)
Matende Ezviitiko Zvekunze Wholesale 6x12m
Kunze Kunopisa Kutengesa Matende Ezviitiko Party
6x12m Heavy Duty PVC Yemuchato Party Tende Ine Fi ...